ကျွန်ုပ်သည် Cisco I-Pristal Final - ကျွန်ုပ်၏အတွေးအမြင်ကိုထောက်ပံ့ပေးပါ။ | Martech Zone
မကြာခဏဆိုသလိုအခွင့်အလမ်းတစ်ခုကဲ့သို့သောဤကဲ့သို့ဖြစ်လာခြင်းသည်ဒေါ်လာ ၂၅၀,၀၀၀ နှင့်အလားတူကုမ္ပဏီတစ်ခုနှင့်အလုပ်လုပ်ရန်အခွင့်အရေးတစ်ခုဖြစ်သည် Cisco သည် မင်းရဲ့စိတ်ကူးကိုလက်တွေ့ဖြစ်အောင်လုပ်ဖို့!
သင်မဖတ်မီသင့်ထောက်ခံမှုကိုအသုံးပြုနိုင်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏လျှောက်လွှာသည်နောက်ဆုံးအဆင့်သို့ရောက်သော်လည်းမဲအပေါ်တွင် မူတည်၍ ပေါ့။ အကယ်၍ မဲပေးခြင်းကိုဖွင့်ထားဆဲဖြစ်လျှင်သင်မှတ်ပုံတင်ပြီးကျွန်ုပ်တို့အတွက်မဲပေးလျှင်ကျေးဇူးတင်လိမ့်မည်။
Cisco's I-Prize Web Site အတွက်မှတ်ပုံတင်ပါ
Login လုပ်ပြီး SaaS POS စိတ်ကူးတွင်“ Promote” ကိုနှိပ်ပါ။
အဘို့အမှတဆင့်ကိုကလစ်နှိပ်ပါ Cisco သည်ငါ - ဆု ဗီဒီယို
စားသောက်ဆိုင်လုပ်ငန်း၌ကျွန်တော်သည်တာ ၀ န်ထမ်းဆောင်နေသည်မှာကြာပြီဖြစ်သည်။ စားသောက်ဆိုင်ပိုင်ရှင်များနှင့်ကိုင်တွယ်ရသည့်အဓိကပြeasilyနာများထဲမှတစ်ခုမှာနည်းပညာများကိုအလွယ်တကူနှင့်စျေးသိပ်မကြီးလှသောနည်းပညာများကိုရှာဖွေ။ ချမှတ်နိုင်ခြင်းဖြစ်သည်။ အမှန်အတိုင်းပြောရလျှင်စက်မှုလုပ်ငန်းသည်ခေတ်နောက်ကျနေပြီဖြစ်သည်။ Point of Sales စနစ်သည်ကုမ္ပဏီများအတွက် ၁၀% ထက်ပိုသောကုန်ကျစရိတ်နှင့်ကုန်ကျစရိတ်မှာအလွန်နည်းပါးသည်။
ကျွန်ုပ်အလုပ်လုပ်သောကုမ္ပဏီသည် Online Ordering ကို POS စနစ်များနှင့်ပေါင်းစပ်ရာတွင် ဦး ဆောင်ခဲ့သည်။ ဒါဟာမယုံနိုင်လောက်အောင်စိန်ခေါ်မှုတစ်ခုပဲ။ POS စနစ်များသည်အနည်းဆုံးဆယ်စုနှစ်တစ်ခုအကြာတွင်နည်းပညာနောက်ကျပြီးဝဘ်မှတစ်ဆင့်အီလက်ထရွန်နစ်စီးပွားရေးအတွက်အဆင်သင့်မဖြစ်သေးပါ။ POS ကုမ္ပဏီများသည်၎င်းတို့၏စနစ်များကိုအွန်လိုင်းပေါင်းစည်းရေးအတွက်ဖွင့်လှစ်မည့်အစားစိတ်မချရသော၊ မပြည့်စုံသောအင်္ဂါရပ်များနှင့်အတူအပိုလိုင်စင်ကုန်ကျစရိတ်များလိုအပ်လာသည်။
Office application များ၊ အီးမေးလ်အပလီကေးရှင်းများနှင့်ဖောက်သည်များဆက်နွယ်မှုစီမံခန့်ခွဲမှုစနစ်များသည် ၀ န်ဆောင်မှုအဖြစ်ဆော့ဝဲလ်သို့ပြောင်းရွှေ့နေစဉ် POS စနစ်များမှာမရှိသေးပါ။ ယခုအချိန်တွင်ကုမ္ပဏီများကလက်ခံထားသောဖြေရှင်းချက်များချမှတ်ရာတွင်အဓိကကျသည်။ ဒီအချက်ကိုစိတ်ထဲ ထား၍၊ ကျွန်ုပ်၏အတွေးအခေါ်ကို Cisco ၏ဝက်ဘ်ဆိုက်ဖြစ်သော SaaS POS။ စိတ်ကူးကလက်ရှိ POS ဆော့ဖ်ဝဲကိုယူပြီး POS ဟာ့ဒ်ဝဲထက်အင်တာနက်ကိုသုံးပါ။
အားသာချက်များမှာများစွာသော - Online Ordering နှင့်ပေါင်းစပ်ခြင်းသည်အဆင်မပြေမှုဖြစ်လာသည်။ လုပ်အားခ၊ ဘဏ်လုပ်ငန်း၊ အီးမေးလ်အရောင်းအ ၀ ယ်လုပ်ငန်း၊ မိုဘိုင်းဆက်သွယ်မှု၊ ထုတ်ကုန်အထောက်အပံ့များစသည့်အခွင့်အလမ်းသစ်များပေါ်ပေါက်လာသည်။ (ဆော်လမွန်ငါးမျိုးစုံထွက်ပေါ်လာခြင်းကမန်နေဂျာကိုပိုမိုအမှာစာပေးရန်တောင်းဆိုသည်။ သူအတည်ပြုပြီးအမိန့်ကိုအီလက်ထရောနစ်နည်းဖြင့်ပေးပို့သည်) ။
ဒီနေရာမှာ Cisco ကကျွန်တော်တို့ကိုမယုံနိုင်လောက်တဲ့အခွင့်အလမ်းတစ်ခုပေးခဲ့တာပါ။ အကြံအစည်အကောင်အထည်ပေါ်လာတာကိုကျွန်တော်မြင်ချင်ပါတယ်။ ဤကဲ့သို့သောအတွေးအခေါ်ကိုစျေးကွက်သို့တင်ပို့ရန်နှင့်ပိုမိုသင့်လျော်သောကုမ္ပဏီရှိကြောင်းကျွန်ုပ်မယုံကြည်ပါ။ လိုအပ်သောကွန်ယက်အခြေခံအဆောက်အအုံ၊ လုံခြုံရေး၊ ပါးလွှာသောဖောက်သည်နည်းပညာ…ဤအရာများသည် Cisco ၏အားသာချက်များဖြစ်သည်။
စောင့်ကြည့်ပါ Cisco I- ဆုဘလော့ဂ် အပိုဆောင်းအသေးစိတ်သည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏အကြံဥာဏ်ကိုမြှင့်တင်ရန်မမေ့ပါနှင့် !!! ဒီအဖွဲ့မှာကိုယ့်ဘာသာကိုယ်ဘီလ်ဒေါ်ဆင်၊ Carla Ybarra-Dawson နှင့် ဂျေဆန် Carr က.
Tags: CiscoCisco သည် i- ဆုcisco iprize ပါ
Inspir လုပ်ပါ။ Formulas ကိုမလိုက်နာပါနဲ့
ဧပြီ 4, 2008 မှာ 6: 25 pm တွင်
Promote ကို နှိပ်ပြီးပါပြီ။ အဆင်ပြေမယ်လို့ မျှော်လင့်ပါတယ်။
ဧပြီ 4, 2008 မှာ 6: 38 pm တွင်
Shawn ၏ပံ့ပိုးကူညီမှုအတွက် များစွာကျေးဇူးတင်ရှိပါသည်။ အခင်းအကျင်းကို ပြောင်းလဲရန် အခွင့်အရေးများစွာရှိသည့် လက်တွေ့ကျသော အသုံးချပလီကေးရှင်းတစ်ခု ကျွန်ုပ်တို့တွင် ရှိသည်ဟု ကျွန်တော်ထင်ပါသည်။ တရားသူကြီးတွေအပြင်မှာ ကျွန်တော်တို့ အာရုံစိုက်မှု သိပ်မရှိဘူး၊ ဒါကြောင့် မဲတချို့ ကောက်ဖို့ ကြိုးစားနေတယ်။
ကျွန်ုပ်တို့သည် သင့်အား ကျေးဇူးတင်ပါသည်။
ဧပြီ 5, 2008 မှာ 8: 55 AM
ကျွန်ုပ်သည် အဆိုပါဆိုက်တွင် အကောင့်တစ်ခုဖန်တီးပြီး သင့်အား မဲပေးရန် ပြီးခဲ့သည့် 10 မိနစ်အတွင်း ကြိုးစားခဲ့သည်။ စကားဝှက်အတွက် ရူးသွပ်သောလိုအပ်ချက်များကို ကျော်ဖြတ်ပြီးသည်နှင့် တင်ပြရန်ကြိုးစားသောအခါတွင် ASP အမှားအယွင်းမျက်နှာပြင်များကို ဆက်လက်ရရှိခဲ့ပါသည်။
နောက်မှ ထပ်ကြိုးစားပြီး ဝင်နိုင်မယ်လို့ မျှော်လင့်ပါတယ်။ ဆောရီး!
ဧပြီ 5, 2008 မှာ 9: 13 AM
စိတ်ကူးကောင်းတယ်လို့လည်း ထင်ပါတယ်။ Intuit သည် လွန်ခဲ့သောနှစ်အနည်းငယ်က စာရင်းကိုင်ဆော့ဖ်ဝဲဖြင့် ၎င်းကိုလုပ်ဆောင်ခဲ့ပြီး စားသောက်ဆိုင်များအတွက် ကောင်းမွန်သောကိရိယာတစ်ခုဖြစ်သည်။
ကံမကောင်းစွာဖြင့်၊ သင်သည် ဤကဲ့သို့သော အယူအဆကို မြှင့်တင်ရန် ပထမဆုံးဟု ကျွန်ုပ်မထင်ပါ။ အခု concept နဲ့ ပတ်သက်ပြီး လုပ်ဆောင်နေတဲ့ ကုမ္ပဏီ နှစ်ခုကို ကျွန်တော် သိပါတယ်။ ဒါပေမယ့် မင်းကို ငါမဲပေးမယ်။ Cisco ၏ ပါဝါနှင့် အရင်းအမြစ်များသည် POS စားသောက်ဆိုင်စနစ်များ ပေါင်းစပ်ထားသော အားလုံးထက် များစွာကျော်လွန်ပါသည်။
ဧပြီ 5, 2008 မှာ 11: 05 AM
Adobe AIR ကို အသုံးပြု၍ သိသာထင်ရှားသော client-side လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းရှိရန် လိုအပ်နေသေးသည်ဟု ထင်ရပါသလား။ ဒါမှမဟုတ် Cisco-ish နဲ့ မလုံလောက်ဘူးလား။
ဧပြီ 5, 2008 မှာ 11: 16 AM
Mike - ချိတ်ဆက်မှု ပြတ်တောက်သွားသောအခါတွင် သင်သည် ဒေသဆိုင်ရာ ဒေတာသိမ်းဆည်းမှုတွင် မရှိမဖြစ် လိုအပ်ပါသည်။ AIR သည် အမှန်တကယ် ဖြစ်နိုင်ချေ ရှိ၊ မရှိ ဆုံးဖြတ်ရန် လှုံ့ဆော်မှု ဖြစ်သည်။ AIR သည် လှည့်ကွက်ကို သေချာပေါက် လုပ်ဆောင်နိုင်သော်လည်း Cisco သည် ပါးလွှာသော client တစ်ခုကို တီထွင်ခဲ့မည်ဆိုလျှင်၊ ၎င်းသည်လည်း အလုပ်ဖြစ်နိုင်သည်။
ဧပြီ 6, 2008 မှာ 3: 42 AM
ဒါကြီးပဲ- ကံကောင်းလိုက်တာ။ မင်းအနိုင်ရတဲ့အခါ ငါ့ဆိုဒ်အတွက် အင်တာဗျူးတစ်ခု လိုချင်ပါတယ် 😉